35 xildhibaan oo ka laabtay dalabkii is-casilaadda + 22 sheegay in laga been abuurtay + Magacyada qaar & xog kale. – idalenews.com
35 xildhibaan oo ka laabtay dalabkii is-casilaadda + 22 sheegay in laga been abuurtay + Magacyada qaar & xog kale.
Magaalada Muqdisho oo maalmahaan ka socdeen dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda ayaa la sheegayaa in 35 xildhibaan ka noqdeen soo jeedintii ahayd in Madaxweynaha Soomaaliya is casilo. Sidoo kale 22 Xildhibaan ayaa sheegay in magacooda laga been abuurtay oo aysan kamid ahayn xildhibaanada qorshahaas horboodayey.
Daawo Sawirada: Ciidamada Kenya oo Dabaq Dheer kasoo tuuray Gabar Soomaaliyeed.
Muwaadin U dhasey Dalka Turkiga oo Ku Geeriyoodey Xeebta Magaalada Muqdisho.